MPT Davo | Myanmar Tech Press
မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာနှင့် စိတ်ကြိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေါင်းစည်းထားသည့် DaVo ပက်ကေ့ချ်အသစ်ကို MPT မှမိတ်ဆက်
2021-02-01 2021-03-25 Admin MPT
MPT သည် သုံးစွဲသူများအတွက် ဒေတာများများနှင့် စိတ်ကြိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ် နိုင်ပြီး အပိုထပ်ဆောင်းငွေများ ပေးဆောင်ဖို့ မလိုသည့် ပက်ကေ့ချ်တန်ဖိုး၏ ၂ဆပမာဏ တန်ဖိုးရှိသည့် Data နှင့် any-net voice minutes များရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်မည့် 1GB နှင့် မည်သည့် operator ကို မဆိုခေါ်ဆိုရန် ၁၅ မိနစ်ပါဝင်သည့် ၇ ရက်သုံး (သို့မဟုတ်) ရက် ၃၀ သုံး ရွေးချယ်ဝယ်ယူ နိုင်သည့် DaVo ပက်ကေ့ချ်အသစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
DaVo pack ရက် ၃၀ သုံးကို (30 GB ဒေတာ +450 any-net minutes မည်သည့်အော်ပရေတာမဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်) သင့်တော်သည့် နှုန်းထားဖြစ်သည့် ၉၉၉၅ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး DaVo pack ၇ ရက်သုံးကိုမူ (7GB ဒေတာ +105 any-net minutes မည်သည့်အော်ပရေတာကိုမဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်) ၂၆၉၅ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Photo Source https://web.facebook.com/mptofficialpage
“MPT က သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေ တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့အတူ အခုလိုမျိုးတစ်မူထူးခြားတဲ့ ပက်ကေ့ချ်တွေကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ်ပေးအပ်လျက်ရှိပါတယ်။သုံးစွဲသူတွေ ပိုမိုအဆင်ပြေစေဖို့ အတွက် ရက် ၃၀ စာ 30 GB ဒေတာ နဲ့ အော်ပရေတာအားလုံးကို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ 450 any-net minutes ပါဝင်တဲ့ DaVo ပက်ကေ့ချ် ဝန်ဆောင်မှုကို ထပ်မံပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ DaVo ပက်ကေ့ချ် ဝန်ဆောင်မှုဟာ လက်ရှိသုံးစွဲသူတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့အသုံးစရိတ်ပေါ်မူတည် ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်း အသက်သာဆုံး ဒေတာရော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပါ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ မိုဘိုင်းလ် ပက်ကေ့ချ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသေချာပါပဲ” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ စီးပွားရေးဌာနကြီး၏ အရာရှိချုပ် ဖြစ်သူ Mr. Tetsunori Nagashima မှပြောကြားခဲ့သည်။
“မြန်မာပြည်နှင့်အတူရှိနေမည့် MPT” ဆိုသည့်ကတိကဝတ်နှင့်အတူ MPT မှ သုံးစွဲသူများအတွက် ငွေကြေးသက်သာပြီး ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများ ကာလရှည်ကြာပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ MPT မှ ဆွေသဟာ၊ ရှယ်ပြော၊ ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid/postpaid စနစ်လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများအနေဖြင့် အဆိုပါ ပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ DaVo pack အသစ်ကို အမျိုးမျိုးသော channel များမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး တစ်ခုထက် ပိုသောပက်‌ကေ့ချ်များကိုလည်း ဝယ်ယူအသုံးပြုခွင့်ရှိ မည်ဖြစ်သည်။ voices minutes အားလုံးကို ပြည်တွင်း on-net သုံးစွဲမှုနှင့် off-net မိုဘိုင်းလ်သုံးစွဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U app (သို့မဟုတ်) *995# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift/ 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့် ဖုန်းနံပါတ် ရိုက်နှိပ်ကာ လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
MPT နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက Hotline နံပါတ် 106 သို့ခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း ၊ MPT ၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာ သို့မဟုတ် MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။
MPT က ပြည်တွင်းဖုန်းလိုင်းအားလုံးကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး လက်ကျန်မိနစ်များကို သယ်ဆောင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြိုက်ရာခေါ် အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်
MPT သုံးစွဲသူများအတွက်“ရွှေအိပ်မက်” အစီအစဉ်အား မိတ်ဆက်
MPT သုံးစွဲသူများ ရှယ်ကြည့် Data Pack ဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေမှုများကို အသက်သာဆုံးနှုန်းထားများဖြင့် စိတ်ကြိုက် ကြည့်ရှုနိုင်
MPT Club အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အထူးခံစားခွင့်များ ရရှိခံစားနိုင်မည့် Global Single’s Day အထူးပရိုးမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက်
← ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ခေတ်စားလာသော Video Trends များနှင့် OPPO Reno5 ၏ ဗီဒီယိုပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ချက်များ
Samsung Galaxy S21 5G Series စမတ်ဖုန်းများ မြန်မာပြည်တွင်စတင်မိတ်ဆက် →